युक्रेनमा देखिएको हिंसाको अन्त्यका लागि पुटिन, म्याक्रोँ र मार्केलबीच फोनवार्ता। - Malayakhabar
होम पेज फिचर युक्रेनमा देखिएको हिंसाको अन्त्यका लागि पुटिन, म्याक्रोँ र मार्केलबीच फोनवार्ता।
युक्रेनमा देखिएको हिंसाको अन्त्यका लागि पुटिन, म्याक्रोँ र मार्केलबीच फोनवार्ता।
epa08058418 (FromL) Ukrainian President Volodymyr Zelensky, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron and Russian President Vladimir Putin giveapress conference afterasummit on Ukraine at the Elysee Palace, in Paris, France, 09 December 2019. The Normandy format was created in 2014 to resolve the conflict between Kiev and the breakaway republics in Ukraine's east. EPA-EFE/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
एजेन्सी := रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलबीच फोनवार्ता भएको छ ।
उनिहरुका बीचमा युक्रेनका विषयमा कुराकानी भएको रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सो फोनवार्ताका क्रममा खासगरी युक्रेनमा पछिल्लो समयमा देखिएको हिंसाको अन्त्यका लागि कुराकानी भएको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुको सो आन्तरिक द्धन्द्ध रोक्नका लागि भन्दै उनीहरुबीचमा आवश्यक छलफल र परामर्श भएको बताइएको छ । साथै रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रकाशन गरेको सो विज्ञप्तिमा अरु पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ । -सिन्ह्वा
अघिल्लो लेख सांसद सुनुवारले कैदीबन्दीलाई दिए खसी उपहार।
पछिल्लो लेख मलेसियामा दशैँको फुलपातीकै दिन रक्सी सेवनले लियो धिरज राईको ज्यान।